ကွာတားဖိုင်နယ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် မက်ဆီ ဘာပြောခဲ့လဲ? - Sports Gabar
ကွာတားဖိုင်နယ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် မက်ဆီ ဘာပြောခဲ့လဲ?
အာဂျင်တီးနားအသင်းခေါင်းဆောင် လီယွန်နယ်မက်ဆီက အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ ကာတာကိုအနိုင်ရခဲ့ခြင်းဟာ လာမယ့်ပွဲအတွက်ပါ ယုံကြည်မှုတိုးစေခဲ့တယ်လို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မက်ဆီဦးဆောင်တဲ့ အာဂျင်တီးနားအသင်းဟာ ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုပွဲ (၂)ပွဲကစားအပြီးမှာ နိုင်ပွဲမရရှိခဲ့တာကြောင့် ရုန်းကန်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ (၃)ပွဲမြောက်မှာတော့ အာရှချန်ပီယံ ကာတာကို(၂)ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တာကြောင့် ကွာတားဖိုင်နယ်ကို တက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မက်ဆီက အာဂျင်တီးနားအသင်းအနေနဲ့ ကာတာကိုအနိုင်ရတဲ့ပွဲမှာ ယုံကြည်မှုတွေ ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီး ကွာတားအဆင့်အတွက် မြင့်မားတဲ့ အရှိန်အဟုန်တစ်ရပ်ကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မက်ဆီက-
” ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ပွဲရခဲ့တယ်၊ ဒါကအရေးကြီးပါတယ်၊ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုပွဲမျိုးကိုလိုအပ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ပိုမိုတိုးတက်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ထားခဲ့ပြီး၊ ဒီပွဲက အဲဒီ့ရည်မှန်းချက်ကို ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ နောက်ထပ် ကိုပါအမေရိက ပွဲစဉ်အတွက် ကျွန်တော်တို့ စတင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ ” လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
အာဂျင်တီးနားအသင်းဟာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲမှာ (၂)နှစ်ဆက်တိုက် ဗိုလ်လုပွဲကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်း ချီလီကို (၂)နှစ်လုံး ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်နဲ့ ရှုံးနိမ့်ထားခဲ့ပါတယ်။
ကှာတားဖိုငျနယျတကျရောကျနိုငျခဲ့ပွီးနောကျ မကျဆီ ဘာပွောခဲ့လဲ?
အာဂငျြတီးနားအသငျးခေါငျးဆောငျ လီယှနျနယျမကျဆီက အုပျစုနောကျဆုံးပှဲစဉျမှာ ကာတာကိုအနိုငျရခဲ့ခွငျးဟာ လာမယျ့ပှဲအတှကျပါ ယုံကွညျမှုတိုးစခေဲ့တယျလို့ ပွောကွားလိုကျပါတယျ။
မကျဆီဦးဆောငျတဲ့ အာဂငျြတီးနားအသငျးဟာ ကိုပါအမရေိကပွိုငျပှဲရဲ့အုပျစုပှဲ (၂)ပှဲကစားအပွီးမှာ နိုငျပှဲမရရှိခဲ့တာကွောငျ့ ရုနျးကနျခဲ့ရပါသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ (၃)ပှဲမွောကျမှာတော့ အာရှခနျြပီယံ ကာတာကို(၂)ဂိုးပွတျအနိုငျရခဲ့တာကွောငျ့ ကှာတားဖိုငျနယျကို တကျရောကျသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ မကျဆီက အာဂငျြတီးနားအသငျးအနနေဲ့ ကာတာကိုအနိုငျရတဲ့ပှဲမှာ ယုံကွညျမှုတှေ ပွနျလညျရရှိခဲ့ပွီး ကှာတားအဆငျ့အတှကျ မွငျ့မားတဲ့ အရှိနျအဟုနျတဈရပျကို တညျဆောကျနိုငျခဲ့တယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ မကျဆီက-
” ပှဲကောငျးတဈပှဲဖွဈခဲ့ပွီးတော့ ကြှနျတျောတို့နိုငျပှဲရခဲ့တယျ၊ ဒါကအရေးကွီးပါတယျ၊ ယုံကွညျမှုတညျဆောကျနိုငျဖို့ ကြှနျတျောတို့ ဒီလိုပှဲမြိုးကိုလိုအပျပါတယျ၊ ကြှနျတျောတို့ ပိုမိုတိုးတကျဖို့ ရညျမှနျးခကျြထားခဲ့ပွီး၊ ဒီပှဲက အဲဒီ့ရညျမှနျးခကျြကို ဖွညျ့စှမျးပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ၊ နောကျထပျ ကိုပါအမရေိက ပှဲစဉျအတှကျ ကြှနျတျောတို့ စတငျနိုငျခဲ့ပါပွီ ” လို့ ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
အာဂငျြတီးနားအသငျးဟာ ကငျြးပပွီးစီးခဲ့တဲ့ ကိုပါအမရေိကပွိုငျပှဲမှာ (၂)နှဈဆကျတိုကျ ဗိုလျလုပှဲကိုတကျရောကျနိုငျခဲ့ပမေဲ့လညျး ခြီလီကို (၂)နှဈလုံး ပငျနယျတီအဆုံးအဖွတျနဲ့ ရှုံးနိမျ့ထားခဲ့ပါတယျ။
Previous Article နည်းပြသစ်အဖြစ်လမ်းပတ်ကိုခန့်အပ်ကြောင်း (၄၈)နာရီအတွင်း ချဲလ်ဆီးကြေငြာမည်
Next Article ကွာတားဖိုင်နယ်တွဲဆိုင်းတစ်တွဲထွက်ပေါ်လာပြီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးကမ္ဘာ့ဖလား